Wake ngiphuphe uhambo emkhunjini? Breathe umoya opholile kanye nokuphumula ulalele nokububula yamanzi, ukuhlangabezana nsuku zonke endaweni entsha futhi ujabulele iflothi kwenkundla ngo ... Uma kunjalo, khona-ke isikhathi ukuya cruise! Umkhumbi "Ivan Kulibin" iyona kangcono le njongo. Namuhla sifuna ukukutshela mayelana izici cruise iholide, kanye ukuchaza nemizila ethandwa kakhulu. Udinga ukuhlela iholide kusengaphambili, futhi manje-ke kuba lula okuningi ukwenza.
Umkhumbi "Ivan Kulibin" eyakhelwe eCzechoslovakia futhi kubhekwa umklamo elula kunazo imikhumbi izivakashi. Laba bobathathu-emphemeni ehhotela ezimhlophe kokuntanta ifakwe imishini navigation yesimanje. Emkhunjini kuthatha abantu 300. Okusho ukuthi, uzoba nethuba ngesikhathi cruise ukuhlangabezana bese uxhumana.
Umkhumbi "Ivan Kulibin" iye kabusha ngo-2007. Ngokuhamba ke linwetshelwe span emphemeni main, isiza ukundiza izitebhisi setha endaweni okufikela kuyo izingcingo, ezakhiwe ihholo ifenisha upholstered. On the umkhumbi waba ukhululekile nakakhulu, kwaba impahla real ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla. Le restaurant kwi emphemeni main ifakwe air conditioning.
emisha ezithintiwe nezindlwana, kwanezelwa nokucwila nanjengezihlambi. Manje kungenzeka ukuya ohambweni olude, kuyilapho phambi umkhumbi "Ivan Kulibin" liye lasetshenziswa esengeziwe usuku uhambo.
Ubude umkhumbi emithathu emphemeni - 97 amamitha. Elincane, kungaba kudlule kalula phakathi kwemiselekazi ewumngcingo nesihluthu. Sludge kuyinto 2.3 amamitha, ububanzi - 15 amamitha. ngesivinini esingamakhilomitha angaba ngu-28 km / h. Nokho, lo mkhumbi izivakashi kwanela. Umthamo abagibeli - abantu abangu-300, ngamunye bangathembela inkonzo ukhululekile, ethokomele futhi omkhulu.
It inikeza izivakashi hhayi kuphela kumakhabheni yabo ethokomele nongumqondisi wezivakashi, okuyinto izoveza iqembu ku ukuvakasha. Esikebheni kwakuneqembu lapho ziphumule salon nezindawo zokudlela ezimbili, ibha kanye isikhungo sezokwelapha, ekamelweni ayina kanye evulekile ohlangothini kompheme.
Lapha zonke izivakashi linikeza izimo best for lonke iphupho lakhe. Kungenxa yalesi izivakashi uthande umkhumbi "Ivan Kulibin". Navigation 2016 kuvula kwemizila emisha eminingana, okuzoxoxwa ngezansi, kodwa okwamanje ake sigxile imininingwane yasekhaya.
Kuyinto into ebaluleke kunazo zonke kwabaningi, ngoba kulapha lapho kuzodingeka uchithe isikhathi esiningi phakathi nawo wonke uhambo. Asikhulume kancane kabanzi mayelana nokuthi umkhumbi "Ivan Kulibin". Indawo kumakhabheni kuzokusiza uzulazule okwengeziwe ebhodini.
emphemeni Lower - indawo isabelomali abahambi. Kube baneziphephetha elula ifakwe ubuncane Izinsiza. On the ephansi emphemeni kumakhabheni ahlukaniswe 3A quadruple, nge ukugeza, bamanzi ashisayo nabandayo, kanye kabili ngaphandle izindawo. Lapha uzothola embhedeni futhi itafula elincane, iqoqo edingekayo amashidi futhi ithawula.
On emphemeni main kukhona yokudlela futhi abagwedli. ukwahlukanisa okuhle ayivumeli amaphunga seep ku kumakhabheni yokuhlala. Ungakhetha double embhedeni gumbi nge echibini (2A). Ukuze umndeni abasha ephelele embhedeni kathathu noma gumbi quadruple (2B). Ngamunye wabo ifakwe indishi yokugeza ngamanzi ashisayo nabandayo. Lezi izikebhe ezibhekwa inketho Luhle imindeni, hhayi eqolo futhi ukhululekile ngokwanele.
Futhi siyaqhubeka ukuhlola umkhumbi "Ivan Kulibin". Incazelo onamakamelo kuyinto iphuzu elibaluleke kakhulu, ngoba izivakashi bangaba nekuvisisa kahle izimo lapho bayoba ukuchitha amaholide abo. emphemeni Isilinganiso cishe zonke matasa kumakhabheni yokuhlala. Ngaphezu kwalokho kubo kukhona kuphela ibha kanye lounge Ukufundwa lapho ungakwazi ukuchitha isikhathi esihlalweni ukhululekile incwadi noma ingilazi isiphuzo ngacela.
Cabins kule emphemeni zihlukile yinduduzo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene yokuhlukanisa 1. Leli kamelo kabili umnsalo emphemeni phakathi, elineshawa futhi yangasese, esiqandisini air conditioning. Amakamelo ayidabuli phakathi emphemeni maphakathi (1A) libhekene endaweni enkulu, enkulu ngakho kulabo abathanda ukunethezeka. Ngokufanayo ifakwe, zingase ifakwe imibhede owengeziwe.
Amakamelo 1B wokugubha - a double gumbi aft emphemeni phakathi. Zonke amakamelo futhi babe air conditioning ne esiqandisini, yokugezela eshaweni. Ekugcineni, 1B - a kumakhabheni embhedeni nge tikhungo tangasese zitholakala kule ingxenye aft esitebhisini noma ibha.
indawo Izintandokazi zezivakashi - emphemeni isikebhe. Kukhona indawo enkulu cinema kanye solarium, kanye yokudlela kakhulu. Ngaphezu apholile ekilasini 1 futhi 1A wachaza ngenhla ahlelwe Suites ukhululekile. Ukuze Ongoti wenduduzo, kufanelekile-lokulala efulethini, i-suite kabili emphemeni isikebhe. It unikeza zonke Izinsiza, eshaweni yokugezela, i-TV bese usetha nevidyo rekhoda, kanye ifriji air conditioning. Ikamelo has a usofa, okunikeza emkhathini ekhethekile wenduduzo. Junior ungachazwa ukuthi siqukethe ekamelweni elilodwa. Ezinye izindaba zika-Igumbi ezifanayo ngokuphelele zangaphambilini.
Kusukela Nizhny Novgorod eMoscow
Ake manje sibheke izindiza ukuthi ukukunikeza "Ivan Kulibin". Lo mkhumbi motor ukuhlela izinguquko zakho kuye ngokuthi inkathi yonyaka, futhi ngenxa yalokho, kumelwe kuqala baxhumane nabaphathi balezo zezinkampani zokuvakasha kanye ukucacisa ulwazi. Omunye imizuliswano ethandwa kakhulu lakala ukwenza uhambo ukusuka Nizhny Novgorod enhloko-dolobha emuva. Lolu hlelo kuhloswe ngalo izinsuku eziyi-7 futhi ugcwele kakhulu.
Luqala ngokunikela Ukuvakashela Kostroma, kodwa yokupaka lesingemaminithi lange-30 kuphela, ukuze kuphela isikhathi ukuthatha ezinye izithombe. Kodwa lapho uya khona eduze, Yaroslavl, uzokunika ithuba nengxenye ngosuku ukuhamba emigwaqweni yayo. Ngemva kwasemini ngeke vakashela Rybinsk futhi sithathe uhambo kakhulu lomuzi. Lokho kukhona kuphela umbhoshongo insimbi isimo Cathedral, enganikeza izivakashi ukugibela!
Ngosuku lwesithathu kuthanda wena Dubna. Musa ukuphika ngokwakho injabulo ukuvakashela Ginseng ipulazi kanye ufunde mayelana umlando waleli dolobha. Ngosuku lwesine zizomakwa ngokufika eMoscow. Lapha uzothola achitha usuku lonke, uhlelo ocebile iye enawulungiselelwa. Ukuhlolwa Red Square kanye Alexander Garden, LikaKristu UMsindisi Cathedral.
Ngakusasa uzothola edolobheni Museum Myshkin. Kokubona uhambo ivumela uvakashele iminyuziyamu nemibukiso zihamba emigwaqweni yalo muzi wasendulo. Ngokulandelayo, leli qembu ibuyisela enhlokodolobha. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi isevisi ibhodi kakusekho udumo. Zonke bathi ukudla simnandi kakhulu, abasebenzi nenhlonipho eziwusizo kanye nenhlangano omuhle kakhulu hambo.
cruise intengo lincike gumbi wena. Igumbi ngaphandle izindawo kuwufanele 10 200 ruble umuntu ngamunye yesidlo ezintathu kuhlanganisiwe. Cabins nge ukugeza umcengezi - kusuka 11 200 kuya ku-15 200. I amakamelo ukhululekile tikhungo tangasese ukuqala ngo 16 000, futhi Suites kusuka 30 000. Intengo kuhlanganisa yokuhlala kanye nokudla, kanye izinkambo waqondisa, okuyinto kuhlelwa for kulo mzila. Uhambo engeziwe ozikhethela akufakiwe.
Uma phambi iholidi enkulu ukuthi ufuna ukuba ujabule futhi inzuzo, sincoma ukuthi ukhethe cruise eside emkhunjini "Ivan Kulibin". Ubude kokuhlala enhlokodolobha yase-Astrakhan - izinsuku ezingu-19. Phakathi nalesi sikhathi, lo mkhumbi kuyoba udabula lamadolobha amahle kakhulu futhi ezithakazelisayo yeRussia. Uyoba uvakashele Kostroma futhi Myshkin, Yaroslavl, benzisa futhi Nizhny Novgorod, Cheboksary futhi Nizhny Novgorod. Uhambo abathandwayo uvumele ukubazi ezweni lakubo.
Izindleko cruise kuye gumbi akhethiwe iqala kusukela 37 000 kuya 130 kanye 000 Suites. Uphenyo "Ivan Kulibin" Cruise olusha njalo kumawebhusayithi ezisemthethweni zezinkampani zokuvakasha ukuthi bekwi kumiswa amaqembu. Lolu hambo kuyinto intandokazi izilaleli ezihlakaniphile abaneminyaka engama-40. Izivakashi bathi amasonto amathathu endleleni ukukwazisa okuningi ezweni lemizi, ukuchitha eziningi izikhathi ezimnandi, nokuxhumana nabantu ezithakazelisayo. Intengo kuhlanganisa yokuhlala kanye nokudla, kanye nokuzijabulisa ebhodini. Izindleko ukuvakasha iphakethe - ruble 5000.
uhambo lwezinsuku ezinhlanu ikuvumela ukuthi ukhethe ukuba baphumule ngisho nabantu matasa kakhulu. Umkhumbi "Ivan Kulibin" (isithombe uzokunika ithuba uyilethe imidwebo) inikeza ukwenza uhambo fabulous futhi ulwazi ka izingosi mlando, emuvakashela amabandla ubudala namathempeli.
Iqala uhambo e Kostroma, ekuseni. I izivakashi kuqala wavakashela Yaroslavl futhi wobuciko esiyingqayizivele bokwakha Russian - Church of Eliya uMprofethi. Ngo Rybinsk angaya ukubona izungeze lo muzi. Izivakashi bathi hambo kakhulu aphethwe emizini Dubna, eMoscow Uglich. Buyela Kostroma ezinsukwini ezinhlanu.
Izindleko zalesi Uhambo luqala nge ruble 7000. Amakamelo zesimanje esinqunyiwe (washstand) izindleko kusuka 8000 kuya ruble 12 000. Uma ukhetha indawo nge tikhungo tangasese, kuzodingeka akhokhe kusuka 16 000 kuya ku-23 000 ruble. Okunethezeka Cabins kukhona ruble 35 000.
Intengo kuhlanganisa yokuhlala e endlwaneni eyakhiwe futhi ukudla nokuzijabulisa ebhodini. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, ukuvakasha - njengenombolo ungqumukela phakathi inganekwane. Uzobona ngamehlo akho izindawo amahle kakhulu ezweni lethu, futhi ngeke ube nesikhathi ukuvakashela iningi labo ukuze ngesikhathi esifushane kangaka.
Lena enye isiqondiso ezithakazelisayo, okungase isinyathelo kanye ukuhlala ngempelasonto. Ubude besikhathi izinsuku 4. Volgograd umkhumbi isuka ngo 15:00 kanti uhambo luqala. kwakusihlwa Lovely izivakashi wakhonza egumbini lokudlela elikhulu, ngesicelo kungenzeka ukuphuma ku evulanda evulekile kwi emphemeni, kukhona itafula. Ukwahlulela ukubuyekezwa, izisebenzi ebhodini isebenza ngakho ngokushelela ukuthi yonke imisebenzi abazenzi ncamashi njengoba kwakuhleliwe. Njengoba elula - kokunikeza kwasemini noma dinner - kanye ukubunjwa kokuqeda leqembu uhambo.
Ngosuku lwesibili ihlangabezana Astrakhan umkhumbi "Ivan Kulibin". Izibuyekezo bathi le ngxenye tour ezithakazelisa kakhulu. Kuhlanganisa nokuvakasha ngezinyawo uzungeze umuzi, ngokuvakashela ezibiyele futhi ababhishobhi lasendulo, Swan Lake futhi isikhungo esingokomlando. Ngosuku lwesithathu uzothola epaki eziluhlaza, ekuseni ngosuku lwesine ubuya ekhaya. Izindleko ukuvakasha umuntu ngamunye, kuhlanganise ukudla - kusuka 8 000 kuya ku-30 000 ruble.
imicabango yabantu zezivakashi
Zonke izibuyekezo ukuchaza umkhumbi "Ivan Kulibin" njengoba best Russian izivakashi liner. kumakhabheni Cosy, ukudla omuhle kakhulu, service nobungane - futhi konke lokhu, uma kubhekwa ukuthi ungathenga izindiza ezishibhile ukuze kumakhabheni elula. Futhi ziyini indawo, ukubhukuda phambi kwakho! Kungcono-ke ukuze uthole ndawonye okungenani kanye uhambo.